Mogadishu Journal » Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo musharixiinta ku tilmaamay Qaran dumis
Mjournal : — Madaxweyne ku-xigeenka maamul gobolleedka Puntland Jen C/samad Cali Shire ayaa isaga oo ku sugan degmada Taleex ee gobolka Sool, waxaa uu ku tilmaamay musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Punland in ay yihiin Qaran dumis, isaga oo u soo jeediyay eedeyn ballaaran.
Isaga oo ka jawaabay eedeyn dhawaan qaar ka mid ah musharixiinta u jeediyeen, kadib markii ay ku eedeeyeen madaxweyne ku-xigeen in uu colaad ka dhax hurinayo beello nabadoon oo wada degan, ayuu sheegay in mushrixiintaas yihiin kuwo iska hadllay oo Qaran dumis ah sida uu hadalka u dhigay.
‘’Annaga sababaha aan degmada Taleex u joogno waa mid cad, musharixiinta eedeymahaas soo jeediyay, iyaga ayaa colaad abuur ah, waxaan leenahay dastuurka dib ugu noqda,’’ ayuu yiri Jen C/samad Cali Shire
Sidoo kale Gen Cabdisamad Cali ayaa xusay in musharixiinta hadalkaas sheegaya looga baahanyahay in ay dib ugu noqdaan dastuurka u yaala Puntland taasina aysan ahayd wax afka qaban kara.
Waxaa uu mar kale ku celiyay madaxweyne ku-xigeenka in aan wax shir ah lagu qaban karin degmada Taleex, isaga oo sheegay in ay wax dhici karo tahay in si dhuumaaleysi ah shirar loo qabto, laakiin waxaa uu sheegay in marnaba aan la aqbali doonin shir si toos ah uga dhaca degmada Taleex.
Wax shir ah oo lagu qabanayaa ma jiro, wax ka socdaana ma jiro…umadda yaan la weyraxin yaan la luggoyn yaan been loo sheeginshir ka dhacaya Taleex ma jiro haba yaraatee umadduna yay isku soo luggoyn”ayuu yiri.
Booqashada uu Taleex ku tagay Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Gen Cabdisamad Cali Shire ayaa noqoneysa tii labaad uu ku tago muddo laba bilood ah,waxaana arrintaan ay kusoo beegmesaa xili gebi ahaanba la kala diray Baarlamaankii dhawaana doorasho la geli doono.